US, UK, France na Germany na-agba ụmụ amaala ha ume ka ha pụọ ​​​​na Etiopia ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Etiopia Na -agbasa Akụkọ » US, UK, France na Germany na-agba ụmụ amaala ha ume ka ha pụọ ​​​​na Etiopia ugbu a
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị mba ọzọ nyere ndụmọdụ siri ike ka ha pụọ ​​na Addis Ababa
Esemokwu dị ugbu a malitere na Northern Ethiopia otu afọ gara aga, mgbe gọọmentị etiti bidoro ibuso ndị agha mgba megide otu nnupụisi nke onwe, Tigray People's Liberation Front (TPLF).
N'ime egwu ndị nnupụisi ga-aga n'isi obodo Etiopia. Addis Ababa, ọtụtụ gọọmentị Western na-agba ụmụ amaala ha ume ka ha pụọ ​​​​na Etiopia ozugbo enwere ike.
Ozi mba ofesi Germany na ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya France na Addis Ababa wepụtara nkwupụta dị iche iche taa na-adụ onye ọ bụla n'ime ụmụ amaala ya nọ na mba ahụ ọdụ ka ọ pụọ n'egbughị oge. US na United Kingdom ewepụtala ndụmọdụ ndị ahụ n'oge na-adịbeghị anya nye ụmụ amaala ha.
The United Nations (UN) gosikwara na ọ na-arụ ọrụ iji 'bupụ' ndị ezinụlọ nke ndị ọrụ mba ụwa na Etiopia n'ihi ọnọdụ nchekwa na-akawanye njọ na ala.
Na mbido ọnwa a, ndị agha gọọmentị nwụchiri ma jide ndị ọrụ Etiopia 22 n'oge mwakpo a wakporo na Addis Ababa Ezubere iche maka ndị agbụrụ Tigray, UN kwuru. E mechara tọhapụ ụfọdụ.
Otu a, nke chịrị mba ahụ kemgbe ọtụtụ afọ tupu achụpụ ya n'afọ 2018, n'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya jisiri ike nwetaghachi ikike nke ọtụtụ mpaghara ugwu Tigray nke gụnyere isi obodo ya bụ Mekele. N'ụbọchị Tuzdee, ndị TPLF kwuru na ha ewegharala Shewa Robit ma na-aga n'ihu Addis Ababa, ihe dị ka kilomita 220 (kilomita 136).
Ndị Briten chere na ekwesịrị ịga n'ihu na-eyi ihe mkpuchi ihu na ...
Glass Lewis na ndị Arabesque na -emekọrịta ihe iji kwalite ...
Ọchịchị Alaeze Ukwu iji gosipụta ndị na-ere ahịa mmapụta ka ...
Nsogbu njem nlegharị anya na mgbake ebe: Ọhụrụ ga-abụrịrị...
Russia gbakwunyere Italy ọhụrụ, Vietnam, Azerbaijan, Kyrgyzstan...
Nabata azụ na IMEX America Ugbu a Naanị Otu ụbọchị pụọ
Myeloid leukemia: ọgwụgwọ ọhụụ ọhụrụ
Ụzọ ọhụrụ 2 esi esi anụ ezi: dị ụtọ ma dị nro
Otu ụlọ nkwari akụ Radisson: West na Central Africa ...
Ndị otu ndu ọhụrụ nke Aprecia kwupụtara
Ụgbọ elu Geneva na New York na SWISS na United ...
Jamaica na-anabata ụgbọ elu ọhụrụ si German Airline...
Columbia China mepere ụlọ ọgwụ ọhụrụ na nke kachasị na…
Mgbe ị na-ehi ụra dị mkpa karịa ogologo oge ị...
Ihe ịchọ mma Korea Vella na-agbasawanye na Japan ugbu a
Omicron: iyi egwu ọhụrụ ma ọ bụ ọ nweghị ihe dị mkpa?
G20 Rome Summit: mmechi ogbako ogbako na 31…